Android App : Myanmar Mobile Software Developer
အလန်းလွန် အလွန်လန်း တဲ့ UDN Pro_23.2.apk
Root လုပ်ထားတဲ့ Android User တွေအတွက် အလန်းလွန် အလွန်လန်းတဲ့ Application လေး တစ်ခု ပေးပါမယ်။ UDN Pro ( Ultimate Dynamic Navbar Pro ) အမည်ရှိတဲ့ Apk လေးပါ။ ဒီ apk လေးကို မိမိတို့ရဲ့ဖုန်းမှာ ပါရှိတဲ့ Power , Home , Back , Menu , Volume ……… အစရှိတဲ့ ခလုတ်တွေ သုံးစရာ မလိုတဲ့ အပြင် အခြား လျှင်မြန်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ရရှိမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီ App လေးရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ Navbar ( Button […]
ဖုန်းပေါ်မှာ ကွန်ပြူတာနဲ့ သုံးနေသလိုသုံးနိုင်တဲ့ Browser
ဒေါင်းဖြစ်အောင်ဒေါင်းပြီး သုံးစေချင်ပါတယ်။ Android ဖုန်းပေါ် မှာ ကွန်ပြူတာနဲ့ ထပ်တူထပ်မျှ လုပ်ဆောင် လို့ရတဲ့ အရမ်းကောင်းတဲ့ Browser လေးပါ။ Facebook မှာဆို Ask Question , Add File …… စတာတွေအပြင် ကွန်ပြူ တာမှာ ရရှိတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် အားလုံး ကို Android ဖုန်းပေါ်မှာ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ကွန်ပြူတာနဲ့ လုပ်မှ 50GB Free ရတဲ့ Dropbox ကိုတောင် ကွန်ပြူတာ မလိုပဲ 50GB Free ရအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လောက် ပြီးပြည့်စုံသလဲ Screen Shot လေးတွေကိုသာ ကြည့်လိုက်ပါ။ DOWNLOAD ( 20.1 MB) mediafire link […]
မစ်ကောပေးမယ်_V 1.7.apk (မြန်မာ Mod)
ဒီ App လေးကတော့ Android User တော်တော်များများ သဘောကျအကြိုက်တွေ့မယ်ထင်ပါတယ်။ Apk နာမည်လေး တွေ့လိုက်တာနဲ့ ဘာဆိုတာ သဘောပေါက်မှာပါနော်။ ကျွန်တော် ကတော့ ဒီ ကောင်လေးကို သဘောကျလို့ မြန်မာလို ပြန်ပြင်ထားလိုက်ပါတယ်။ “ကို” တို့ “မောင်” တို့ “ချစ်” တို့ “သဲ” တို့ ကို ဖုန်းပြန်ခေါ်စေချင်တဲ့အခါ Miss Call ပေးဖို့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ကိုယ်စိတ်ကြိုက် သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း Miss Call အဖြစ်ခေါ်ပေးပြီး End လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သဘောကျ လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ကလင့်တွေမှာ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ လင့်ကနေ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။ DOWNLOAD ( 754 kbs) mediafire link dropbox link […]
ES File Explorer File Manager_3.2.0.apk
Android အသုံးပြုသူတိုင်း မရှိမဖြစ်ဆောင်ထားရမယ့် App လေးပါ။ 3.9.2014 ကတည်းက Google Play Store မှာ Update ပေးတာပါ။ မသိသေးတဲ့ သူတွေအတွက် ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဘာတွေ အသစ်ပါလဲ ကြည့်လိုက်ပါဦး။ What’s New V3.2.0 -All network Window -UI -Clipboard is moved to Window -Dozens of improvements FAQ Meet Android bug error -24 (not ES issue) & cant update? -Clear Google play cache,reboot -Clear data/data/com.estrongs.android.pop(for root) V3.0.0~V3.1.9 Homepage;En/Decrypt;Saveto;Multithread […]
TTPod ( ဘာသာပြန် ) !
” TTPod ” ဆိုတာနဲ့ဘာလုပ်တဲ့ကောင်လေးလည်းဆိုတာလူတိုင်းသိမယ်ထင်ပါတယ်ဗျာ…. ဒီကောင်လေးနဲ့သီချင်းလေးတွေကို သံစဉ် လေးတွေ ကာရာအိုကေပုံစံမျိုး နားထောင်လို့ ရနိုင်သလို သီချင်းတွေလည်း အွန်လိုင်းကနေ တဆင့်ဒေါင်းနိုင်တာမို့ လို့တော်တော်များများအကြိုက်တွေ့ တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်လေးတခုပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။။ ကျွန်တော်ကတော့ ဒီကောင်လေးကို မြန်မာမှုလေးပြုထားပါတယ် တတ်နိုင်သလောက်လေး ဘာသာပြန်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် အမှားပါလျှင် သည်းခံပေးကြပါဗျာ…… ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဘာသာပြန်မဟုတ်တော့ လုပ်ရတာ အခက်အခဲလေးတွေ ရှိနေပါသေးတယ်ဗျာ….. လိုအပ်တဲ့သူများ ဒေါင်းလိုက်ကြပါအုန်းဗျာ……….. Download ( TTPod ဘာသာပြန် ) Mediafire Link […]
QuickPic_3.7.1.apk ဒီ Application လေးကတော့ ကျွန်တော် အနှစ်သက်ဆုံး Apk တွေထဲက တစ်ခုပါ။ ခုထိလည်း စွဲစွဲ မြဲ မြဲ သုံးနေဆဲပါ။ ဒါကြောင့် မသိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ သုံးနိုင်ဖို့ ပြန်လည် မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ သေချာ အသုံးပြုကြည့်ဘူးရင် မိမိတို့ ဖုန်းမှာပါတဲ့ Gallery ကိုတောင် သုံးချင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကလည်း 830kbs လေးရယ်ပါ။ Screen Shot လေးတွေ အရင်ကြည့်လိုက်ပါဦး။ Image Viewer (ဓါတ်ပုံများကြည့်ရန်) Video Player ဗီဒီယိုများကြည့်ရန်) Image Editor (ဓါတ်ပုံများ ပြုပြင်ရန်) ပေါ့ပေါ့ ပါးပါးနဲ့ အရမ်း မြန်ဆန်တဲ့ App လေးတစ်ခုပါ။ အောက်ပါလင့်များတွင် ဒေါင်းပါ။ mediafire link dropbox […]
Android ဖုန်းတွေအတွက် Video Player ကောင်းလေးတစ်ခုပါ။ Format တော်တော်များကို ဖတ်တာကြောင့် တင်ပေးလိုက်တာပါ။ MX Player ကို လူတော်တော်များ အသုံးပြုနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ MX Player က ARM V7 သမားတွေ အတွက် အဆင်ပြေပြီး ARM V6 သမားတွေမှာ အဆင်မပြေပါဘူး။ ARM V6 Code ကိုပါ Install လုပ်ပြီး သုံးမှ အဆင်ပြေတာမို့ARM V6 သမားတွေရော ARM V7 သမားတွေရော အဆင်ပြေပြေနဲ့ အသုံးပြုနိုင်မယ့် V Player ကို တင်ပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Description VPlayer 3.x is the next generation of VPlayer, […]
Forward Training Center v1.0 (Android Application) ကျွှန်တော်တို့သင်တန်းကျောင်းရဲ့ Apk လေးပါ။ ဒီ App ကနေ Android ဖုန်းကိုင်ဆောင်ကျတဲ့သူများ အလွယ်တကူ အချိန်စာရင်း၊ စတင်ဖွင့်မည့်ရက်၊ ဘာသာရပ်များ သင်မည့်အကြောင်းအရာများ၊နေရပ်လိပ်စာ အစရှိသည်တို့ကို တစ်ပြေးညီသိရှိနိုင်ပါတယ်။ ပထမဆုံးအသုံးပြုရင်တော့ Internet လေးလိုအပ်ပါတယ်။ App ထဲဝင်တိုင်း ၃စက္ကန့်သာသာလောက် Update လုပ်ပေးနေပါလိမ့်မယ်။ ဒီ App လေးကို ၀ိုင်းဝန်း Share ပေးပါအုံး https://play.google.com/store/apps/details?id=mmsd.phyochan.forwardtraining http://d-h.st/zYx Share
Next Page » Like Us On Facebook! MMSD Group ကိုလာခဲ့ပါ။ © 2014 Myanmar Mobile Software Developer. WordPress Theme by ဖြိုးချမ်း.